Arts & Humanities » ရွာအင်အား တဂျီးမဆန်သာ (အာဟိ)	44
Wintpyone Myint – သမ္မတ ကလင်တန် ဟာ ငယ်တုန်းက တော်တော်ကို ညံ့တဲ့ ကောင်လေးတဲ့။ သာမန်ထက်ကို နည်းနည်း ပိုညံ့တယ်။ သူ့အမေ အကိုင်အတွယ်ကောင်းလို့ သူထိပ်တန်း ရောက်လာတယ်လို့ ဖတ်ဖူးထားပါတယ် သဂျီး။ အမေ့စကား တစ်ခွန်းဟာ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဘာနဲ့မှကို မတူဘူး။ သိပ်ပြီး တာသွားတာကို။ Thakhin Kai Bwor – ဟုတ်မှာပါ..။ အဖေပစ်သွားတဲ့အတွက်..ခံစားချက်လည်းကြီးတဲ့ ဘီလ်ကလင်တန်ဟာ.. သူသမ္မတဖြစ်တော့.. စင်ဂယ်မားသားတွေကို… ထောက်ပံ့ကြေးတွေအသားကုန်ပေးတာပဲ..။
သဂျီး ကွန်မြူနစ်သိပ်မဆန်စမ်းပါနဲ့။ သူ့အခွင့်ရေးအရလွှတ်ထားပေမဲ့တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့ guide line ကတောမိဘမှန်ရင်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါကိုအကျယ်ရှင်းပါ့မယ်အားရင်။ မိဘကျေးဇူးနဲ့ကိုင်ကိုင်ပေါက်ပြီးဖင်ပိတ်မညင်းစေချင်ဘူး တာဝန် ဝတ္တရား လူသားဆန်မှု့တွေပေါ်မှာအခြေခံရမယ်။ သဂျီးကမြန်မာ့ရှေးထုံးတွေဖိနှိပ်မှု့ကြားကြီးပြင်းလာဖူးလို့လားတော့မသိဘူး မိဘနဲ့သားသမီးတာဝန်ယူမှု့ဆိုတာတွေကိုသိပ်တဖက်စွန်းရောက်အောင်ညင်းနေတော့တာပဲ။ နောက်တပိုင်းဆက်ရှင်းမယ်
ဘလာ ဘလာ :P
မျဉ်းပြိုင်နှစ်ချောင်းလိုဘဲ ဆုံမှတ်သည် အင်ဖနတီ :P
တဂျီး ပြောတာ ပြန်ကောက်ပေးရရင် လူတစ်ယောက်ကို ပဲ့ပြင်တာ ပညာရေးတဲ့။ မိဘနဲ့ ရင် အုပ်မကွာနေရတိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးး၊ အဲဒီ မိဘ ညာဏ်နည်းရင် နည်းသလို ကလေးရဲ့ အရေးအရာ ကိစ္စတွေ ပြောင်းသွားနိုင်တယ် လို့သူ ဆိုလိုချင်တာ ကိုယ်နားလည်တယ်။
အဟေးဟေးး။ ဒီ စာကြောင်း အရီးမြ မြင်ပြီး ပြန်လာပါစေဗျာ။
ကျော်လွင်ဖြိုး says: စောစောစီးစီး ဂွတိုက် သွားလိုက်ဦးမယ်။
kai says: လောလောဆယ်.. ဒီတပါတ်ထဲဖြစ်တာ… မြင်သာအောင်ရှင်းပြပါ့မယ်.။
ကျုပ်က..သူက.. ကလေးမိဘတွေက.. ဒီတိုင်းပြည်မယ်နေသူတွေက.. အစိုးရဆီအခွန်ဆောင်တယ်..။ အဲလိုဖြစ်တော့ရော..
မြင်တွေ့နေရသလောက်ကတော့.. မြန်မာပြည်ကသူတွေထက်.. “သူတို့အများကြီးပိုချစ်တတ်ကြသည်..။” Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မိဘကျေးဇူးဆိုတာကိုပဲပြန်ဆွဲထုတ်ဦးမယ်။
အတော်များများနဲ့ကွဲလွဲမယ်ထင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: သော် ပြောတာ မှန်ပေမဲ့
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ဒါလည်း ဘရိန်းဝတ်ပဲ သလားး
ကျော်လွင်ဖြိုး says: အဟိ.. ခုမှ ရုံးပြန်တက် အေးအေးဆေးဆေး နားချိန် ရလို့ ပြန်ရေးရမှား)
Thint Aye Yeik says: ”ဖျင်ပိတ်ငြင်းသော သဂျီးဆိုသူကို ဖျင်ပိတ်ပြန်ငြင်းကြသူများ”ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ page ထောင်ကြမား ?
kai says: အင်း.. ဒီဇတ်လမ်းမူရင်းဇတ်ထုပ်က.. ကိုရင့်ဘ၀ကိုကြည့်ပြီး.. ဖြန့်တွေးတာကနေ.. ဖြစ်လာတာလို့.. ပြောရင်လည်းရပါတယ်..။
ကဲ.. ငြင်းကြည့်ပေတော့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Thint Aye Yeik says: အမငွိ
ဒါက ကျေးဇူး ရှိလို့ ဆပ်ကို ဆပ်ရမယ်လို့ တွေးပြီး လုပ်နေတာတော့ မဟုတ်။ မိအိုဖအိုကို မပြည့်မစုံ ချို့တဲ့စွာ မြင်ရဖို့ရာ. . .
ကိုယ့်မိဘ ဆိုတဲ့ သွေးသားတော်စပ်မှုလေး ရှိတော့ သူစိမ်းထက်တော့ စေတနာ ပိုသပေါ့။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ် ဆက်လျှောက်ပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဖောက်ရဦးမပေါ့။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အမှန်တော့ မွပြုံးပို့စ်မှာသူကြီးမန့်ထားတာတွေက မိဘကျေးဇူးဆိုတာနဲ့မချုပ်နှောင်စေချင်ဘူး ဆိုတာတော့မှန်တယ်ဗျ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အတော်မျှတတဲ့ အတွေးပါ မယ်သော်လေး။
လုံမလေးမွန်မွန် says: မှတ်မှတ်ရရ အသက် ၁၀ နှစ် ..(၅) တန်းစတက်တဲ့နှစ်မှာပဲ… အိမ်က စီးပွားရေးစကျတယ်… အဖေနဲ့အမေ ရဲ့ ရန်ပွဲတွေကြားမှာပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်.. အရွယ်ရောက်လာလို့ ဝတ်ချင်စားချင် ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ှမှာပဲ..သူများနဲ့တန်းတူ ဆိုတဲ့ အဆင့်ကနေ တဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်.. စာတော်တဲ့သူဖြစ်တော့ အမေက အရမ်းအားကိုးတယ်… သူခံစားရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို မခံစားစေချင်ဘူး.. အဲဒီအချိန်ကတည်းက တစ်ခုပဲ သိခဲ့တယ်.. ဒီဆင်းရဲဒုက္ခက ထွက်ပေါက်ဟာ ငါဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီးတော့.. ဆယ်တန်းအောင်တယ်..ကိုယ်ဝါသနာပါတာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်.. စဉ်းစားသမျှ ဆုံးဖြတ်သမျှဟာ မိသားစုကို ပြန်ကယ်နိုင်ဖို့ပဲ.. ဒုတိယနှစ်မှာ အဖွားဆုံးတယ်.. တတိယနှစ်မှာ အဖေဆုံးတယ်.. ကျောင်းပြီးးပြီးချင်း အလုပ်လုပ်တယ်… စာသင်တယ်.. တတ်နိုင်သမျှ အိမ်ကို ပြန်ပို့တယ်.. အမေက အလုပ်မလုပ်ဘူး… မောင်လေးက သူ့တစ်ကိုယ်ရည် သုံးနိုင်ရုံလောက်ပဲ… တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း စဉ်းစားမိတယ်… ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်ကြည့်စရာမလိုရင် ငါဖြစ်ချင်တာတွေ အကုန်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုပြီး.. အထူးသဖြင့် သူငယ်ချင်းတွေ MBA ဘွဲ့တွေရ.. ကျောင်းတွေတက် လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိသားစုမှာလည်း ကိုယ်က ဖိုးသူတော် ဖြစ်နေတော့ မတတ်နိုင်ဘူး.. ဒီလိုဖြစ်လာအောင်လည်း အမေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခခံခဲ့လည်း ဆိုတာ သိနေခဲ့တော့.. အခုလို အိမ်ကို ပြန်ထောက်ပံ့ခွင့်ရတာကိုပဲ ဝမ်းသာနေတာ… အားကျပါတယ်.. မိဘကို ကန်တော့တယ်ဆိုရုံလောက်ပေးပြီး ကိုယ့်လစာနဲ့ကိုယ် နေနိုင်သုံးနိုင်တဲ့သူတွေကိုပေါ့… နိုင်ငံခြားက စနစ်တွေကို အားကျတယ်… နိုင်ငံခြားက လူတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မြန်မာပြည်က လူကြီးတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် အလုပ်မလုပ်ဘဲ သားသမီးလုပ်စာကို ထိုင်စားတာများတယ်.. သူတို့အတွက်လည်း လုပ်စရာအလုပ်မရှိဘူး.. သားသမီးတွေကလည်း မိဘကို အလုပ်လုပ်ခိုင်းရင်ကိုပဲ ကျေးဇူးမသိတတ်သလို ဖြစ်တယ်.. မြန်မာစာသင်ပေးတဲ့ နိုင်ငံခြားသူက အသက် ၆၀.. အလုပ်လုပ်တယ်.. နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တယ်.. အမေ့အသက် ၄၈.. အိမ်မှာပဲ ဘုရားတရားလုပ်တယ်.. ဘာတွေကွာလဲဆို စနစ်ကွာတယ်… ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေ စကားပြောကြည့်တယ်.. ကိုယ်တွေ အသက်ကြီးလာရင် ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ကိုယ်တွေလို မဖြစ်စေရဘူး.. ကိုယ့်ကို ကြည့်စရာမလိုဘဲ သူတို့ဘဝကိုပဲ သူတို့ရှေ့ဆက်နိုင်အောင် အခုကတည်းက ကြိုးစားနေကြတယ်..
ဇီဇီခင်ဇော် says: မမဂျီး အမေပြောဖူးတာရှိတယ်။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အခုနက ရီပလိုင်းကအမွန့်အောက်ရေးမို့ ဘယ်လိုလုပ်ဒီအောက်မဆီမဆိုင်ရောက်သွားလည်းမသိ ဆောရီး။
hmee says: အနောက်တိုင်းက လူတွေ မနွေးထွေးဘူးဆိုတာကို ကန့်ကွက်တဲ့ထဲ များပါမယ်။ ခု လက်ရှိရောက်နေတော့ မျက်မြင်တွေ့နေရတယ်။ လူတိုင်း လူကို လူလို့ပဲ သဘောထားတယ်။ လူကြီးလည်းလူကြီး အလျှောက် ကလေးလည်းကလေး နွေးထွေးမှု အပြည့်။ ကလေးတွေ ကျောင်းမှာ ကလေးအချင်းချင်းရော ဆရာမတွေကော ဆက်ဆံမှုတွေ မြင်ရတွေ မြင်ရတာ ကိုယ်တွေ ဆီနဲ့ တခြားဆီ။ မသိဘူး မမြင်ဘူးပေမဲ့ ကူညီတတ်တယ်။ ကလေးခြင်း အနိုင်ကျင့်တာမတွေ့ရသလောက်။ တယောက်ငိုနေရင် မင်း အကြီးကြီး အဖက်ခံချင်လားဆိုပြီး နှစ်သိမ့်တဲ့ ရင်ထဲက လာတဲ့ ဖက်ခြင်းတွေဟာ တကယ့်ကို နွေးထွေးမှုတွေ။ ဆရာမတွေ ကလေးတွေကို ဆက်ဆံပုံတွေ သိပ်နွေးထွေးတာများ မြင်ရတာ ကိုယ်ပါ လုံခြုံ နွေးထွေးတာ။ ကလေး တခုခုဆို စိတ်ရှည်လက်ရှည်မေး ပြီး နားလည်အောင်ရှင်းပြ။ နွေးထွေးမှုတွေ အရေးတယူရှီမှုတွေ မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာချက်။ ပန်းခြံတွေမှာဆို အဖေနဲ့သား ချက် ကစားနေတာ (အဖေက ၀ှီးချဲနဲ့ )။ အမေနဲ့ စကားတပြောပြော လမ်းလျှောက်နေတာ။ အဖေနဲ့ သား ( အဖေက ၇၀လောက် သားက ၅၀ကျော်လောက်) ငါးအတူတူမြှားနေတာတွေ။ ကိုယ့်အိမ်နဲ့ ကိုယ်နေပေမဲ့ မိဘအိမ် အချိန်မှန်လာ လုပ်စရာရှိတာလုပ် ဆေးခန်းပို့ အပြင်လိုက်ပို့ အမြဲလို တွေ့နေရတာ။ မိသားစုကို အချိန်ပေးတာတွေများ ငြိမ်းချမ်းလိုက်ကြတာ။ အဖိုးအဖွား မိသားစုလိုက်တွေ ပန်းခြံတွေမှာ အချိန်ယူ ပျော်ပွဲစားထွက် အပန်းဖြေနေတာတွေ မြင်ရတော့ ကိုယ်တွေ လူမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်တောင် ပြန်သနားမိသေးသလိုလိုပဲ။ နွေးထွေးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်တွေတောင် မိဘဆီ တနှစ်တခေါက် ပြန်ဖို့ အတော်အချိန်ယူရသေးတာ။ မနွေးထွေးပါဘူးလို့ သိထားတဲ့ သူတွေများ အမြဲလို လာနေတာတွေ့နေရတယ်။
ကြောင်ဝတုတ် says: ပြောရရင်တော့ ဂလိုဗျ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ခက်တာက တိုင်းပြည်က မွဲနေတော့ ဘာလုပ်လုပ် ဘာတွေးတွေး မှားနေတော့တာပေါ့။ မိဘကို ဦးထိပ်ထားတဲ့ လူမျိုးက ဗမာ မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်။ တရုတ်မှ တရုတ်အစစ်။ တရုတ်ဆိုတာက မိဘက သေဆိုသေ ၊ ရှင်ဆိုရှင်တွေ။ အဲတရုတ်တွေ ကောင်းစားနေတော့ ဘာသွားပြောရမလဲ။
kai says: မွဲတာတနှစ်လည်းမက.. ၁၀နှစ်လည်းမက.. အနှစ်၅၀လည်းမက.. အနှစ်၁၀၀လည်းမက.. အနှစ် ၂၀၀ လည်းမက.. အနှစ် ၅၀၀ လည်းမကဆိုရင်.. ဘယ်နေရာ.. ဘာဖြစ်တာလည်း စစ်ရတော့မပေါ့…။
မြန်မာဟာ.. နိုင်ငံရေးစနစ်တွေထဲ.. သက်ဦးဆံပိုင်မြေရှင်ပဒေသရာဇ်လည်းကြုံဖူး..။ တိုက်သတ်သိမ်းအင်ပါယာထောင်သူစစ်မင်းစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့လည်းကြုံဖူး..။ ကိုလိုနီဘ၀မှာတောင်.. အင်္ဂလိပ်လို စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ရဲ့ကိုလိုနီ..။ ဖက်စစ်ဂျပန်ရဲ့ကိုလိုနီလည်းဖြစ်ဖူး.။
နီဖြူကွန်မြူနစ်တွေအုပ်ချုပ်တာအောက်မှာလည်း တိုင်းပြည်နေရာတော်တော်များများကျဖူး..။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဦးနုခေတ်လည်းဖြတ်ဖူး..။
.. မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတာကြီးရဲ့.. ပြည်သူပိုင်ကောက်သိမ်းတာအောက်မှာလည်း ရောက်ဖူးပြန်…။ အဲ.. အစိုးရလုံးဝအာဏာမရှိတဲ့.. ဗရမ်းဗတာစနစ်တကျ..အုပ်ချုပ်ရေးဘ၀တွေလည်းဖြတ်ဖူးတဲ့အပြင်.. အာဏာရှင်စစ်အစိုးရက..အရောင်ပြောင်းဒီမိုကရေစီ(ဆို)လိုက်ပါတဲ့ခေတ်လည်း.. တွေ့ဖူးပြန်ရော..။
ဒီနေ့စပြင်.. ဒီနေ့.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က.. စတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်.. လို့…စ်..။ ( စကားချပ်.. Reverse engineering စကားလုံးက သုံးရတာသိပ်တော့ မဆိုင်ဘူး.။ ဒါပေမယ့် မူလအဓိပ္ပါယ်လေးကြိုက်လို့..။
မင်း ခန့် ကျော် says: မိသားစုတပြုံတခေါင်းကြီးနဲ့။
kai says: ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးလုပ်သင့်ပြီ..။
Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: အဲသလိုအတွေးအခေါ်ကြီးသာ ကျယ်ပြန့်ကြည့်ပါလား။
kai says: မိဘကျေးဇူး.. ဘာကျေးဇူး..ညာကျေးဇူးဆိုတာမျိုးက.. မြန်မာမှာပဲရှိတာမို့…
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်.. ဘေးလူကလည်း.. လူတဖက်သား မိသားစုအရေးကို..အတင်းတုတ်နှိမ်ချလို့ရတဲ့စာ(စကား) တလုံးလဲတိုးလာသပေါ့..။ ..
မင်း ခန့် ကျော် says: သူကြီးက ခရစ်ယာန်အတွေးအခေါ် လိုချင်သလား?
kai says: ကိုယ်ရင့်စာထဲတင်အဖြေက ပါနေပြီ..
― Lois McMaster Bujold, A Civil Campaign ၃၇ : ၁၀၂-၁၀၇
kai says: ကျုပ်က ဒီလိုရေးတော့ အူကြောင်ကျားနဲ့..” မိဘတွေကို နှိပ်ကွပ်ကြဟေ့. ” လို့မြောက်ပေး.. ရေးနေတယ်လာမလုပ်နဲ့ဦးနော..။ ခင်ဗျားမိဘနဲ့ ခင်ဗျားက.. အဲလိုမိဘ/သားသမီးဖြစ်နေလားလဲ..လာမလုပ်ပါနဲ့နော..။
kai says: ဟုတ်ပါ့..။ ချိုင်းနီးစ်တွေရဲ့.. အဓိကအတွေအခေါ်စီးဆင်းရာ ကွန်ဖြူးရှပ်ဒသနထဲမှာ.. မိဘရိုသေတာက သော့ချက်ဆိုတာပဲ..။
Mr. MarGa says: မြို့မေတ္တာ ဝင်ခံလိုက်ပါဦးမယ်
kai says: လူငယ်တွေ ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေရှိလာတာ.. အားရပါတယ်..။
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့.. မြန်မာပြည်တိုးတက်လာဖို့.. လက်ဆယ်ချောင်း တခါစာလောက် လျှေ့ာပြရတော့မလားပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: How many US Presidents grew up without their biological father – either never knowing him, or losing him by, say, age 13?
weiwei says: အားလုံး ပြည့်စုံအောင် ငြင်းထားပြီးကြပြီဆိုတော့ ဘာမှ ထပ်ငြင်းစရာမတွေ့တော့ဘူး ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရှင်းရှင်းလေးကို ဘာတွေရှုပ်နေကြတုန်းတော့မသိ။
kai says: နားမလည်ရင် အစက ပြန်ဖတ်ကြ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: စိမ်းလိုက်ပြီ။
မင်း ခန့် ကျော် says: ခေါင်းကြီးတဲ့သူတွေမို့
မယူသင့်တာယူကုန်မစိုးလို့ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Thint Aye Yeik says: ”လူမျိုးရေး တရားဟာလဲ ငါ့လူမျိုးမှ ငါ့လူမျိုး၊ တခြားလူမျိုးတွေဟာ ငါ့လောက် မမြတ်။ ငါ့လူမျိုးသာ ကမ္ဘာကြီးစိုးရမယ်ဆိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းသေးသိမ်တဲ့ လူမျိုးရေးတရားမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ချစ်သော်လဲ တခြားလူမျိုးကို မုန်းတီးခြင်း၊ အထင်သေးခြင်း မဖြစ်ဘဲ ကမ္ဘာမှာ တိုင်းပြည် အချင်းချင်း သင့်မြတ်စွာ တဦးအကျိုးတဦး ဖြစ်ပွားစေအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ လူမျိုးရေးတရားမျိုးလဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဂျပန်ပြည်မှာလို စစ်ဘက်က လက်ဝါးကြီး အုပ်ပြီး၊ တိုင်းပြည် လွှတ်တော်က ဘာမှ အစိုးမရတဲ့ ဝါဒမျိုး မရှိရအောင် ၊ စစ်ဘက်ကို တိုင်းပြည်လွှတ်တော်က အုပ်စိုးနိုင်ခွင့် ရှိရမယ်။ .နောက် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့် စည်းရုံးခွင့် အစည်းအဝေး ခေါ်ခွင့်နှင့် စီတန်း လမ်းလျှောက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးတောခွင့်၊ ကိုးကွယ်လိုရာ ဘာသာကိုးကွယ်ခွင့်၊ တရားနှင့် မညီသော အဖမ်းအဆီး အချုပ်အနှောင်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ကိုယ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာနှင့် နေထိုင်ခြင်းကို မတရားသဖြင့် နှောင့်ယှက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ လူတိုင်း ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်၊ အခမဲ့ ဆေးဝါးအကူအညီ ရရှိခွင့်၊ မတရားသဖြင့် စီးပွားချုတ်ချယ်မှုများမှ လွတ်ကင်း ချမ်းသာခွင့်၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများရဲ့ အနည်းဆုံး အခွင့်အရေးများကို အစိုးရက စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၏ အနည်းဆုံး အခွင့်အရေးများကို အစိုးရက စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ တိုင်းပြည်တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်ဓလေ့၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်၊ အိုစာ နာစာ၊ အထိအခိုက် လျော်ကြေးရံပုံငွေ အစရှိသည်တို့ကို အစိုးရက ထားပြီး အိုမင်း၍၄င်း၊ နာဖျား၍၄င်း၊ ထိခိုက်နာကျင်၍၄င်း၊ အလုပ် လုပ်ချင်သော်လည်း အလုပ်မရနိုင်၍သော်၎င်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မပြုစွမ်းနိုင်သူများသည် အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ကို ရရှိခွင့်၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးမျိုးတွေလဲ ရှိရမယ်။ အထက်ပါ အချက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ ဝါဒတွေရဲ့ အခြေခံတွေဘဲလို့ ယူဆတယ်။ ဒီလို အခြေခံ သဘောတရားတွေကို ရည်ရွယ်ရင်း ရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာလဲ ဒီတရားတွေနှင့် ညီတဲ့ အများဆန္ဒအရ ရွေးကောက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း စတဲ့ နည်းစံနစ်မျိုးသာ သုံးရပေလိမ့်မယ်။ ”
ဒီမိန့်ခွန်းကို ဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေး လာပြောတာ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ အသက်ရှည်ခဲ့ရင် . . .
အခမဲ့ ပညာရေးတွေနဲ့. . . လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်နဲ့ပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်သာ အချိန်ကြာကြာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိခဲ့ရင် သူကြီးတောင် ဒီလိုအပြောတွေနဲ့ စစ်လာမြူနေရမှာတောင် မဟုတ်လိုက်။ ဒါမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီးတော် ဒေါ်စုကြီး ငုတ်တုတ် ရှိသေး။
သူကြီးတို့ ဘာတို့ လေကန် ဝေဖန်နေချိန်မှာ သူမက. . .သူမအလွန်ကာလအတွက်တောင် ကြို ပြင်ဆင်နေလောက်တယ်။ ဆိုတော့ သူကြီး. . .
kai says: အသက်၇၀ကျော်အဖွားကြီးက.. ပိတ်ရက်မရှိအလုပ်လုပ်နေတာ.. ကိုရင့်လိုလူငယ်က(လည်း).. လေနဲ့အားပေးနေလို့မဖြစ်ဖူးဗျ..။
ဒီစာစုက..လူသိန်းဂဏန်းလက်ထဲရောက်အောင်ကို ဖြန့်မှာ..။ အဲဒီအတွက်.. ကိုရင်တို့ဆီက.. ဘရုန်းစတိန်းနေတာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဘာလုပ်လုပ် ခေါင်းပြောင်းမှ အကုန်ပြောင်းတာ ။ ခေါင်းမပြောင်းရင် ဘာမှ မပြောင်းဆိုတော့ ခေါင်းပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဟာ ဝေဖန်လေကန် လို့ ပြောလို့ မရ။ ဒါက မိန်းကြီးလေ။ သဘောချင်းညီမျှသည်ဖြစ်စေ၊ မညီမျှသည်ဖြစ်စေ၊ လူ့ဦးနှောက်ရဲ့ အတွင်းကျဆုံး အတွေးအခေါ်ကို စိန်ခေါ်ပြီဆိုတော့ ဒါ ကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
Ma Ei says: ခရီးသွားနေတာနဲ့ ခုမှ ဒီပို့စ်ကို စဆုံးဖတ်ဖြစ်တော့တာ
မောင်ဘလိူင် says: ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ဝင်ငံဦးမယ်။ အိုရှိုပြောသလိုသာ လုပ်ကြ။ လင်မယားတွေ ခလေးမွေးပြီး
kai says: တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမယ်.. အဲလိုနီးပါးပါပဲ..။
မင်း ခန့် ကျော် says: ဒါမျိုးကိုတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတတ်ပြီး
kai says: . သူတပါးကိုအကြွေးချ..အကြွေးမျှော်..အကြွေးယူတာကိုမှ.. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တယ်.. တိုးတက်တယ်ထင်ရင်တော့.. သိပ်မဟန်ဘူးပဲ..။
လူသားဟာ.. ကိုယ့်ဝတ်ကိုယ်ကျေရင်.. .. အိုကေသင့်ပါတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: တဂျီးကိုဝန်းရံကြ ဒုန်းဒုန်းဒုန်း
ဦးကြောင်ကြီး says: ရွှေအိုးသာဂျီး